Muxuu sameeyaa kaaliyaha kalkaaliye caafimaad? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 06/06/2021 10:00 | Tababar
Xirfadaha caafimaadka, kuwaas oo leh muuqaal muhiim ah maanta, ayaa isku duuban qaabab gaar ah oo kala duwan. Ku kalkaaliyayaasha kalkaalinta caafimaadka Iyagu waa xirfadlayaal sameeya hawlo aad muhiim u ah daryeelka bukaanka.
Dadka qaar ee la seexiyo cisbitaalka ma laha madaxbanaani ku filan oo ay ku fuliyaan howlaha maalinlaha ah. Kadib, caawiye kalkaaliye caafimaad ayaa mas'uul ka ah bixinta daryeelkan. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shaqooyinka uu qabtay xirfadyahankan ayaa ah inuu qaybiyo liiska cuntada.
1 Waxay ka caawisaa bukaanada fulinta howlo kala duwan
2 Uruurinta xogta heerkulbeegga
3 Wehel iyo taageero
Waxay ka caawisaa bukaanada fulinta howlo kala duwan
Bukaanjiifka qaar waxay ubaahan karaan caawimaad dibada ah si ay wax u cunaan. Dadka qaar ma haystaan ​​dhaqdhaqaaqa lagama maarmaanka u ah inay fuliyaan daryeel nadaafadeed shakhsiyeed oo kala duwan. Xaaladda noocan ah, kaaliyaha ayaa mas'uul ka ah caawinta adeegsadaha. Mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee kalkaaliyaha caafimaad waa siin wehel joogto ah bukaanka iyo qoysaskooda. Waa qof takhasus gaar ah leh oo qayb ka ah howlaha joogtada ah ee kuwa ay ku dhacaan cudur gaar ah. Waa qof jooga oo, sidaa darteed, wuxuu hubiyaa horumarka iyo horumarka bukaanka.
Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay samaynta sariiraha, habeynta alaabta shaqada, kala shaqeynta diyaarinta qalabka lagama maarmaanka u ah sharaxaadda tijaabooyinka caafimaad ee kala duwan.
Uruurinta xogta heerkulbeegga
Shaqooyinka xirfadlahan waxaa lagu qaabeeyey macnaha guud ee xarunta ay ka shaqeeyaan. Tan iyo markii, muuqaalka la sheegay wuxuu ka shaqeyn karaa isbitaal, xarun caafimaad, hoy dadka waayeelka ah ama xarumaha daryeelka aasaasiga ah. Shaqada aqoonyahankan waxay kaloo taageertaa kalkaalisada iyo dhakhtarka. Waxay la shaqeysaa isku-dubbaridka xubnaha kale ee kooxda. Sidaa darteed, waad daryeeli kartaa diyaarinta waxyaabaha lagama maarmaanka u ah takhasusle si uu u fuliyo hawl gaar ah. Tusaale ahaan, had iyo jeer kormeerida qofka mas'uulka ah, waxaad fulin kartaa ururinta xogta heerkulbeegga.
Ku shaqeynta koox waa mid ka mid ah awoodaha la socda shaqadan. Xirfadlaha ayaa qayb ka ah nidaam isku dubaridan oo hagaagsan, sidaa darteed, wuxuu la shaqeeyaa si loo gaaro ujeeddooyinka. Intaas waxaa sii dheer, tani waa xirfad mihnadeed oo keenta farxad run ah markay ka bilaabato rabitaankan fulin shaqsiyeed.
Wehel iyo taageero
Xitaa marka laba bukaan ay yeeshaan baaritaan caafimaad oo isku mid ah, mid kastaa wuxuu la kulmaa runtiisa xaalado gaar ah oo gaar ah. Taageerada niyadeed aad ayey muhiim ugu tahay kuwa dareema inay nugul yihiin. Kaabashadani kama imaan karto oo keliya kalgacalka saaxiibbada dhow iyo qoyska. Xirfadlayaasha caafimaadku sidoo kale waxay ku dabaqaan caqliga shucuurta shaqadooda maalinlaha ah. Waxay ku dhaqmaan naxariis, dulqaad, ku adkaysi, rajo-wanaag, xirfadaha bulshada, naxariis, iyo damqasho.
Sababtaas awgeed, kaaliyaha kalkaaliyaha caafimaadku wuxuu ku xoojinayaa adkeysiga bukaanka joogitaankan miyir qabka ah. Haddii aqoonyahankan uu arkay wax macluumaad ah oo iyaga ugu yimid maalintii u dambaysay, waxay u sheegi doonaan dhakhtarka ama kalkaalisada arrintaas. Noocani wuxuu si joogto ah ula shaqeeyaa kooxda si loo gaaro isla ujeeddadaas: si loogu bixiyo daryeel bukaan oo aad u fiican geeddi-socodkooda soo kabashada. Tani waa macnaha guud ee shaqadooda maalinlaha ah loo qaabeeyey. Mid ka mid ah sifooyinka ay tahay inuu shaqaalahani kobciyo ayaa ah awoodda dhageysiga. Bukaanku wuxuu u baahan yahay inuu dareemo maqal maxaa yeelay, aragtida aadanaha, waxaa laga yaabaa inuu la kulmo shaki, cabsi ama hubin la'aan. Dhegeysigiisuna wuu dejiyaa wuuna yareeyaa welwelka.
Dadka qaarkiis waxay go'aansadaan inay sii wataan waxbarashadooda ka dib markay heleen cinwaanka Kalkaaliye Caafimaad. Kuwanina waa qaar ka mid ah shaqooyinka uu qabtay xirfadyahankan oo sida ugu dadaalka ugu shaqeeya qaybta caafimaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Muxuu sameeyaa kaaliyaha kalkaaliye caafimaad?
Imtixaannada kaaliyaha maamulka: 5 talooyin oo lagu gudbo